Faq's - BancaNEO
Yimaphi amazwe i-NEO etholakala kuwo?
I-NEO inikeza izixazululo zebhange ledijithali kumakhasimende emhlabeni wonke, enikeza inkululeko egcwele yezezimali.
Ungavula i-akhawunti nathi kungakhathalekile ubuzwe bakho noma umlando wakho wezezimali, kepha sinalo uhlu lwamazwe esingawaxhasi amaklayenti. Ungathola uhlu olugcwele lweziphathimandla ezifakwe ohlwini lwabamnyama ekhasini lethu le-web elizinikele: "Iziphathimandla ezivinjelwe ”.
Ukufaka isicelo se-akhawunti ye-NEO kulula futhi kungenziwa ukude.
Ukuqala inqubo yokufaka isicelo, chofoza ku “Vula i-akhawunti yomuntu siqu” bese uqhubeka nefomu lesicelo. Ngemuva kokulethwa kwefomu lesicelo, icala lakho lizodlula ekubuyekezweni kwethu kokuhambisana.
Lesi sinyathelo singathatha kufikela kuzinsuku zebhizinisi eziyi-7-10. Kwezinye izimo, singakucela ukuthi unikeze imininingwane eyengeziwe ukuze uqedele konke ngokuya ngezidingo zomlawuli wethu.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi ngemuva kokuthi imibhalo yakho ihloliwe futhi i-akhawunti yakho ivuliwe, uzothola i-imeyili evela ku-NEO enesixhumanisi sokusetha iphasiwedi.
Isixhumanisi sisebenza isikhathi esingu-24h futhi ngemuva kokuthi siphelelwe yisikhathi, kufanele ucele esisha ngokuxhumana nethimba lethu lokuSekela Amakhasimende ku [i-imeyili ivikelwe]
Ngemuva kokuthi iphasiwedi yakho isethiwe, sicela uqhubekele ku-Google Play noma ku-AppleStore ukulanda uhlelo lwethu lokusebenza.
Isigaba sokugcina senqubo yokuvula i-akhawunti siqinisekisa ubunikazi bakho ngohlelo lwethu lokusebenza lweselula.
I-smartphone yakho kumele ibe nekhamera engaphambili. Sicela ulungiselele nepasipoti yakho noma i-ID kazwelonke.
Kuyini ukuqinisekiswa kwe-ID?
Kuyinkqubo yokuqinisekisa ubunikazi enikwa amandla umlingani wethu u-Onfido, eyenziwa ngekholi yevidiyo yesikhathi esisodwa.
Ngiyiqedela kanjani ikholi yokuqinisekisa ubunikazi bevidiyo?
Uzakwethu u-Onfido usungule indlela ephephile, evikelekile futhi elula yokuqinisekisa i-ID yedijithali ngesikhathi sangempela, kusuka noma yikuphi emhlabeni.
Ukuqala inqubo yakho yokuqinisekisa i-ID yesikhathi esisodwa, sicela ungene kuhlelo lwakho lokusebenza lweselula le-NEO kusuka ku-smartphone yakho, usebenzisa ikheli lakho le-imeyili nephasiwedi.
Ngesikhathi socingo lwevidiyo uzothatha izithombe zepasipoti yakho noma i-ID kazwelonke, wenze i-selfie, uhambise ikhanda lakho kwesobunxele nakwesobunxele bese ubiza izinombolo ezimbalwa, ozonikezwa uhlelo. Ngeke kuthathe ngaphezu komzuzu owodwa wesikhathi sakho.
Nawa amathiphu ambalwa wokuthi ungazilungiselela kanjani ukwenza ikholi yevidiyo:
Qinisekisa ukuthi usendaweni ethule ngokuxhumeka okuqinile kwe-inthanethi nokukhanya okuhle kwemvelo.
Khetha izwe lakho lokuba yisakhamuzi, hlola ukuthi hlobo luni lombhalo ongalusebenzisa futhi ululungele.
Okubalulekile: ungadlulisa ukuqinisekiswa nge-ID kazwelonke noma ipasipoti uma ungumhlali wase-EU futhi unepasipoti KUPHELA uma ungeyena umhlali we-EU.
Kungani ikholi yokuqinisekisa ubunikazi bevidiyo idingeka?
I-NEO eneSatchel inelayisense ekhishwe nguMnyango Wezinsizakalo Zokwengamela weBhange Likazwelonke Lithuania futhi inikezwe ilayisensi yesikhungo semali esisebenza ngogesi uNr. 28, ngekhodi lomhlanganyeli wohlelo lokukhokha uNr. 30600, futhi uqhuba ibhizinisi ngaphansi kwemithetho yeRiphabhlikhi yaseLithuania, ngokusho kwe-EU Directive (2009/110 / EC) kanye ne-EU Directive (2015/2366) ngezinsizakalo zokukhokha ze-EU.
Kudingeka ngokomthetho ukuthi siqinisekise ubuwena ngaphambi kokukuvulela i-akhawunti yeSatchel.
Inqubo yokuqinisekisa i-ID ngokusebenzisa ikholi yevidiyo inqubo yokuhlonza isilawuli kude ehambisana nomthetho, eyenzelwe ukuhambisana nemithetho nemithetho yasebhange yakamuva, kanye ne-Anti Money Laundering Act (AML).
Kufanele ngibe neminyaka emingaki ukusebenzisa izinsiza ze-NEO?
Okwamanje, ubuncane beminyaka yokuba iklayenti le-NEO ngu-18.
Sisebenza ukwehlisa phansi ngokuzayo, sithuthukisa imikhiqizo yezizukulwane ezisencane.
I-NEO I-akhawunti yamanje
Itholakala kuphi i-akhawunti yebhizinisi le-NEO?
I-NEO yeBhizinisi okwamanje iyatholakala ezinkampanini ezibhalisiwe futhi ezikhona ngokomzimba e-European Economic Area (EEA) noma eSwitzerland.
Lokhu kufaka amazwe alandelayo:
I-Austria, iBelgium, iBulgaria, iCyprus, iCroatia, iCzech Republic, iDenmark, i-Estonia, iFinland, iFrance, iJalimane, iGibraltar, iGrisi, iHungary, i-Iceland, i-Ireland, i-Italy, iLatvia, iLiechtenstein, iLuxembourg, iMalta, iNetherlands, iNorway, iPoland, iPortugal. , ERomania, eSlovakia, eSlovenia, eSpain, eSweden, e-United Kingdom.
Yini engingayenza uma izwe lami lingasekelwa okwamanje?
Sizofaka isicelo sakho ohlwini lwethu lokulinda olubalulekile futhi sizokwazisa ngokushesha lapho izinsizakalo zethu sezitholakala ezweni lakho.
Ngingayivula kanjani i-akhawunti?
Ungavula kalula ifayela le- siqu or ibhizinisi akhawunti ngokuthumela ifomu lokuvula i-akhawunti yomuntu siqu / lebhizinisi, ongalithola kuwebhusayithi yethu.
Ngemuva kokuthi ifomu selithunyelwe, kungathatha izinsuku ezi-7-10 zebhizinisi ukuqedela ukuhlolwa kokuthobela nokuvula i-akhawunti yakho.
Yimiphi imibhalo edingekayo ukuvula i-akhawunti yomuntu siqu noma yebhizinisi?
Ungathola uhlu lwemibhalo edingekayo kuwebhusayithi yethu:
Imibhalo ebekelwe abantu ngabanye: CHOFOZA LAPHA
Imibhalo ebekelwe amabhizinisi: CHOFOZA LAPHA
Yiziphi izidingo ezikhona zabanikazi nabaqondisi benkampani abazuzayo?
Ukuvula i-akhawunti yebhizinisi le-NEO, sidinga ukuqinisekisa imininingwane yabaqondisi kanye nabaninimasheya abaphambili benkampani yakho.
Le nqubomgomo ihambisana nenqubo yokulawula i- “Yazi Ikhasimende Lakho” (KYC), esiza amabhizinisi ukuqinisekisa ubuqiniso bamakhasimende ayo.
Uzodinga ukuhlinzeka ngemininingwane yabantu abangabanikazi abangaphezu kwama-25% wamasheya aqongelelwayo webhizinisi lakho.
Laba baninimasheya nabaqondisi kuzodingeka banikeze isithombe sekhwalithi ephezulu se-ID esemthethweni, esivumelana okungenani izinyanga ezintathu ezizayo. Ungabamema ukuthi bahambise isheke labo le-ID ngokuzimela noma balayishe amadokhumenti egameni labo.
Sicela wazi ukuthi singacela eminye imibhalo.
Yiziphi izinhlobo zama-akhawunti esiwanikezayo?
I-akhawunti yakho eyinhloko ivulwa nge-EUR, iza ne-IBAN ne-BIC eyingqayizivele, futhi yenzelwe izinkokhelo ze-SEPA kuphela.
Kukhona ithuba lokuvula ama-akhawunti angeziwe ngokudluliswa kwamazwe ngezimali ezahlukahlukene nge-IBAN eyabiwe.
Uku-oda ama-akhawunti kwezinye izimali, sicela uthumele ifomu loku-oda le-SWIFT, futhi sizobuyela kuwe nesixazululo esifaneleke kakhulu sezidingo zakho zebhange.
IFomu loku-oda le-SWIFT
Ngabe i-NEO ihlinzeka ngezinsizakalo zebhange eziku-inthanethi?
Yebo. Noma iyiphi i-akhawunti ye-IBAN yomuntu siqu noma yebhizinisi evulwe nge-NEO ifaka ukufinyelela kwamahhala kumasevisi wethu webhange aku-inthanethi.
Ngingakwazi ukuphatha i-akhawunti yami ye-NEO ngqo kusuka ku-smartphone yami?
Yebo, ungafinyelela kalula i-NEO yakho nge-akhawunti nge-smartphone yakho ngokulanda uhlelo lwethu lokusebenza lwebhange leselula (iSatchel ye-iOS ne-Android).
Ungalanda uhlelo lokusebenza lapha:
I-International Bank Account Number (IBAN) iyikhodi ejwayelekile yokuhlonza ama-akhawunti asebhange aphesheya kwemingcele kazwelonke.
I-IBAN yaseYurophu inezinhlamvu ezingama-27 ezingama-alphanumeric.
Noma yiliphi ibhizinisi noma i-akhawunti ye-NEO yomuntu siqu ine-IBAN eyingqayizivele eyabelwe yona.
Ngingayitholaphi i-IBAN yami?
Ungathola imininingwane ye-akhawunti yakho ngokuthatha izinyathelo ezilandelayo:
Ihhovisi Leklayenti le-NEO
→ Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-NEO bese uya kumenyu "yama-Akhawunti" ngakwesokunxele kwesikrini sakho
→ "Ama-Akhawunti" ikhasi
→ Khetha imali edingekayo (uma unama-akhawunti amabili noma ngaphezulu wemali)
→ Chofoza kuthebhu Yemiyalo Yezimali
→ Khetha eyodwa kuma-akhawunti atholakalayo bese uqhafaza kuyo.
Uhlelo lokusebenza lweselula le-NEO
→ Ngena ngekhodi lakho lokungena bese ukhetha imali edingekayo (uma unama-akhawunti amabili noma ngaphezulu wemali)
→ "Faka imali"
Yimiphi imininingwane okufanele ngiyinikeze ukuthola ukwedluliswa okungenayo ku-akhawunti yami ye-NEO?
Ukuze uthole imali kwi-akhawunti yakho ye-NEO, kufanele unikeze lowo okukhokhele imininingwane yakho ephelele ye-akhawunti.
Lokhu kungatholakala ku-NEO Client Office yakho:
- Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-NEO bese uya kumenyu "yama-Akhawunti" ngakwesokunxele kwesikrini sakho
→ Chofoza kuthebhu Yemiyalo Yezimali. Ngemuva kwalokho khetha eyodwa kuma-akhawunti atholakalayo bese uqhafaza kuyo. Imininingwane ye-akhawunti, efana neMali, iBhange, i-IBAN, i-SWIFT BIC, negama lomhlomuli izokhonjiswa.
- Ngena ngekhodi lakho lokungena bese ukhetha imali edingekayo (uma unama-akhawunti amabili noma ngaphezulu wemali)
→ "Faka imali". Ngemuva kwalokho khetha eyodwa kuma-akhawunti atholakalayo bese uqhafaza kuyo. Imininingwane ye-akhawunti, efana neMali, iBhange, i-IBAN, i-SWIFT BIC, negama lomhlomuli izokhonjiswa.
Ngingayivula kanjani i-akhawunti entsha yemali?
Ngingayivala kanjani i-akhawunti yemali engingasayisebenzisi?
Uma ungathanda ukuvala i-akhawunti yakho, mane uxhumane nethimba lethu lokuSekela Amakhasimende ku [i-imeyili ivikelwe] kusuka ku-imeyili yakho ebhalisiwe, bese ucela ukuqala inqubo yokuvalwa kwe-akhawunti.
Uyacelwa ukuthi ukhumbule ukuthi imali eyengeziwe ingasetshenziswa.
Ungabona izinhlelo zethu zentela lapha.
Ngingayivula kanjani i-akhawunti yami evaliwe?
Ngeshwa, akunakwenzeka ukwenza i-akhawunti ivaliwe futhi. Uma ufisa ukusebenzisa izinsiza zethu futhi, sicela uphinde ufake isicelo ngokuthumela ifomu lesicelo se-akhawunti yomuntu siqu noma lebhizinisi.
Ngingayifaka kanjani imali kwi-akhawunti yami ye-NEO?
Okuwukuphela kwendlela ekhona okwamanje yokuxhasa i-akhawunti yakho ngokudluliselwa kwebhange.
Ungathola imiyalo yokuxhaswa kwe-akhawunti yakho ngokuthatha izinyathelo ezilandelayo:
Qaphela: Uma udlulisa imali ususa kwenye i-akhawunti yasebhange egunyaziwe ye-SEPA iye kwi-akhawunti yakho ye-NEO ku-EUR, kufanele uqiniseke ukuthi wenza ukudluliswa kwe-SEPA ukuze ugweme noma yiziphi izimali ezengeziwe ezikhokhiswa yibhange lakho.
Imali izofakwa kwi-akhawunti yakho yeSatchel kungakapheli izinsuku eziyi-1-3 zebhizinisi.
Ngingayifaka kanjani imali kwi-akhawunti yami ye-NEO ngekhadi lesikweletu / lasebhange?
Ngeshwa, le nketho ayitholakali okwamanje.
Ngingayiguqula kanjani inombolo yami yocingo, ikheli le-imeyili, ikheli lokubhalisa noma enye idatha yomuntu siqu?
Ukuze ushintshe imininingwane yakho yokuxhumana noma idatha yomuntu siqu / yebhizinisi, sicela uxhumane nethimba lethu lokuSekela Amakhasimende ku [i-imeyili ivikelwe]
Ngingasithola kanjani isitatimende sasebhange?
Njengamanje sisebenzela ukusebenzisa lesi sici kungxenyekazi yethu yasebhange eku-inthanethi ukuze ukwazi ukufinyelela ngokushesha futhi kalula kwimininingwane yakho yasebhange.
Kuze kutholakale, ungathola isitatimende se-akhawunti ngokuxhumana nethimba lethu lokuSekela Amakhasimende ku [i-imeyili ivikelwe], ekhombisa isikhathi esidingekayo nefomethi yesitatimende esithandwayo ku-imeyili.
Ngisifaka kanjani isikhalazo?
Isikhalazo singafakwa ngeziteshi ezintathu:
1. Imeyili ebhalisiwe ethunyelwe ekhelini lehhovisi lethu iMM BITINVEST OU, Naituse tn 3, Tartu , 50409, I-Estonia;
I-2. I-imeyili [i-imeyili ivikelwe];
3. Ifomu eliku-inthanethi lapha
Samukela noma yimiphi impendulo ebucayi eyakhayo evela kumakhasimende ethu, futhi sikucela ngomusa ukuba unikeze incazelo eningiliziwe yenkinga / izinkinga obhekene nazo. Lokhu kuzosisiza ukuthi sithathe izinyathelo ezifanele ngokushesha.
Ukungena ngemvume ne- Iphasiwedi
Ngingena kanjani ebhange lami ledijithali?
Ungangena kalula kwi-akhawunti yakho yasebhange ledijithali ngokuchofoza kunkinobho yokungena etholakala kubha yokuzulazula ekhasini lasekhaya:
Ukuze ungene ngemvume, sicela usebenzise ikheli lakho le-imeyili eligunyaziwe nephasiwedi oyibekele i-akhawunti yakho.
Ngingayishintsha kanjani iphasiwedi yami?
Ukuze usethe kabusha iphasiwedi yakho, sicela uxhumane nethimba lethu lokuSekela Amakhasimende ku [i-imeyili ivikelwe]
Ngingayishintsha kanjani i-imeyili yami yokungena?
Ukushintsha imininingwane yakho yokuxhumana, sicela uthumele ifomu eligcwalisiwe lokushintsha imininingwane yokuxhumana (isixhumanisi sefomu) kwithimba lethu lokuSekela Amakhasimende ku [i-imeyili ivikelwe]
Ngabe kukhona abasebenzisi abaningana be-akhawunti yami yebhizinisi?
Yebo, kungenzeka ukwengeza umsebenzisi owengeziwe ku-akhawunti yakho yebhizinisi.
Sicela uxhumane nethimba lethu lokuxhaswa kwamakhasimende ku- [i-imeyili ivikelwe] ukuze uthole usizo.
Yini i-2FA (Two-Factor Authentication)?
Kwa-NEO sihlose ukuthola ulwazi lomsebenzisi oluthuthukisiwe, ngenkathi sigcina amazinga aphezulu okuphepha. Yingakho sine-Two-factor Authentication (2FA) endaweni ye-akhawunti yakho ye-NEO, engeza isendlalelo esingeziwe sokuphepha esivikela i-akhawunti yakho ekufinyeleleni okungagunyaziwe futhi sigcine imali yakho iphephile ngaso sonke isikhathi.
Nge-2FA kuzodingeka ukuthi ufake iphasiwedi yakho yomabili ne-OTP (Iphasiwedi Yesikhathi Esinye) ethunyelwa kuwe njalo uma ungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-NEO, kanye nanoma yisiphi isikhathi odlulisa kuso.
Umhlahlandlela womsebenzisi wezinto ezimbili (2FA)
Izinkokhelo & Ukuthengiselana
Kuthatha isikhathi esingakanani ukudlulisa imali kwi-akhawunti yami ye-NEO?
Izikhathi zokucubungula ukudluliswa okuphumayo kuncike ohlotsheni lokudlulisa.
Ukudluliselwa kohlelo lwangaphakathi kuyashesha. Ukudluliswa kwe-SEPA kuthatha phakathi kwezinsuku zebhizinisi eziyi-1-2.
Ukudluliswa kwe-SWIFT kuthatha phakathi kwezinsuku zebhizinisi eziyi-3-5.
Ngifuna ukuthumela / ukwamukela ukudluliselwa ngenye imali kune-EUR, yini okufanele ngiyenze?
Ukudluliselwa kwamabhange okuphumayo / okungenayo kwamanye amazwe kwezinye izimali kune-EUR kutholakala kuphela ngesevisi yethu eyabiwe ye-IBAN.
Angitholanga ukudluliswa ngemali ephelele. Ngabe imali eyengeziwe ikhokhisiwe?
Asikhokhisi mali uma ufaka imali kwi-akhawunti yakho ye-NEO ngokudluliswa kwebhange.
Kodwa-ke, lapho wenza inkokhelo yomhlaba wonke, umthumeli angakhetha iphathi ehlanganisa imali yokudlulisa ephumayo.
Ngokwengeziwe, lapho kutholwa ukudluliselwa kwe-SWIFT, ibhange elixhumanayo (elingumlamuli) lingadonsa imali yokucubungula, yingakho inani elincane lingafakwa ku-akhawunti yakho.
Angitholanga ukudluliswa okungenayo. Kumele ngenzeni?
Uma kwenzeka ukudluliswa okuthunyelwe kuwe kungafakwanga ku-akhawunti yakho, kufanele uthole isiqinisekiso sokukhokha kumthumeli bese usithumela kuthimba lethu losekelo kwa [i-imeyili ivikelwe]
Ngidlulisele ku-IBAN engalungile. Kumele ngenzeni?
Uma udlulisele ku-IBAN engafanele, sicela wazise ngokushesha ithimba lethu losekelo ku- [i-imeyili ivikelwe] bese ubacela ukuthi baqale i-Payment Recall.
Sicela wazi, ukuthi uma ukudluliswa sekuvele kufakiwe ku-akhawunti yomamukeli, ngeke sikwazi ukuhlehlisa okwenziwayo. Kulokhu, sizokweluleka ukuthi sixhumane ngqo nomamukeli sicele ukubuyiselwa imali.
Ngingadlulisela kanjani kwenye i-akhawunti ye-NEO?
Ukwenza ukudlulisa kwangaphakathi, uzodinga kuphela inombolo emfushane ye-akhawunti yomamukeli.
Khetha uhlobo lokukhokha "Ukudlulisa kwangaphakathi" ehhovisi lakho leklayenti, faka inombolo ye-akhawunti, bese uhlelo luzosesha ngokuzenzakalela i-database. Konke okusele ukukwenza ukufaka inani lomsebenzi. Ukudluliswa kuzokwenziwa ngokushesha.
Ngingali-oda kanjani ikhadi elikhokhelwa kusengaphambili?
Ungalandela lesi sixhumanisi oda ikhadi elikhokhelwa kusengaphambili, ezoxhunyaniswa ne-akhawunti yakho ye-NEO.
Qaphela: Unga-oda i-Mastercard ekhokhelwa kuphela uma une-akhawunti yamanje ne-NEO.
Ngingalithola ikhadi ngaphandle kokuvula i-akhawunti yamanje ne-NEO?
Ngeshwa, le nketho ayitholakali. Ukuze uthole ikhadi kufanele uvule i-akhawunti yamanje ne-NEO.
Uyini umehluko phakathi kwamanani ekhokhwayo we-Regular Spender kanye ne-Active Spender?
Umehluko usemikhawulweni yekhadi nezimali. Intela ye-Active Spender ivumela imikhawulo ephakeme ngezimali eziphansi.
Ngingakwazi ukuthuthukisa intela yami kusuka ku-Regular Spender kuye ku-Active Spender?
Yebo, ngokuxhaswa kwengxoxo.
Lizolethwa nini ikhadi lami?
Ngemuva kokuthi i-oda lakho selibekiwe, futhi unikezwe imali eyanele yokukhokhela imali yokuthumela, ikhadi lizovame ukuthunyelwa phakathi nosuku olulandelayo lokusebenza.
Isikhathi esivamile sokulethwa okwamanje sifinyelela ezinsukwini zokusebenza ezingama-20.
Ukulethwa okucacile emazweni e-EU nase-UK akufanele kuthathe izinsuku ezingaphezu kwezingu-3 zebhizinisi.
Ukulethwa okucacisiwe kwamanye amazwe kufanele kuthathe izinsuku ezi-5 zebhizinisi.
Ngingathola amakhadi amangaki nge-akhawunti yami ye-NEO?
I-akhawunti yomuntu siqu: 1 ikhadi lepulasitiki ngomnikazi we-akhawunti ngamunye kanye namakhadi ayi-2 abonakalayo kumnikazi we-akhawunti ngayinye.
I-akhawunti yebhizinisi: ubuningi bamakhadi ama-5 (i-virtual noma ipulasitiki) abangafika kwabangu-5 abanikazi bamakhadi nge-akhawunti yebhizinisi eyodwa.
Ikhadi lami le-NEO lingakhishwa ngamalini?
Okwamanje amakhadi akhishwa nge-EUR.
Ngingalisebenzisa kanjani ikhadi lami?
Ungakwenza lokho ngqo kusuka kuzilungiselelo zamakhadi ehhovisi lakho leKlayenti. Ngemuva kwalokho kufanele uqhubeke nokonga ibhalansi yekhadi lakho.
Yonke imisebenzi yekhadi izonikwa amandla ngokushesha lapho wenza ukuthengiselana kwakho kokuqala ku-ATM noma ku-POS.
Ngingalifaka kanjani ikhadi lami le-NEO?
Khetha isigaba samakhadi ehhovisi lakho leklayenti, khetha ikhadi olidingayo ukuze ufake phezulu, ufake inani nokulandisayo, uma kunesidingo, bese uvumela ukuthengiselana nekhodi yakho.
Okwenziwayo kuzokhombisa ngokushesha ibhalansi yekhadi lakho.
Ngingayitholaphi i-PIN yekhadi lami?
Ungayithola njalo kuzilungiselelo zekhadi. Uma ufisa ukuyiguqula, ungakwenza kanjalo ngengxoxo.
Ngabe ikhadi lami le-NEO linayo into yokuxhumana?
Yebo, wonke amakhadi we-NEO axhumana nawo.
Uyini umkhawulo wamanje wokukhokha ngaphandle kokuxhumana?
Umkhawulo usethwe yibhange lomthengisi, liholwa yi-World Payment Systems. Imvamisa umkhawulo uphakathi kuka-25-50 EUR.
Kuyini okuphephile kwe-3D? Ingabe inikwe amandla ekhadini lami?
I-3D Secure iyisici esakhelwe ukuba yisendlalelo esingeziwe sokuphepha sokuthengiselana kwamakhadi e-commerce.
Wonke amakhadi we-NEO afakwe i-3D Secure.
Ingabe ikhona imikhawulo yamakhadi?
Ungahlola imikhawulo yekhadi le-NEO LAPHA.
Ukuze ukhuphule umkhawulo wakho wekhadi, sicela uxhumane nathi ngengxoxo noma ku-[i-imeyili ivikelwe]
Ngingakwazi ukukhipha imali ekhadini lami le-NEO kwi-ATM?
Ungakhipha imali ekhadini lakho le-NEO kunoma iyiphi i-AMT esekela i-Mastercard. Sicela wazi ukuthi kukhona LINK
Ngingakwazi yini ukukhokha online ngekhadi lami le-NEO?
Yebo, ungakhokha ku-inthanethi ngekhadi lakho le-NEO.
Sicela uqiniseke ukuthi ibhalansi yekhadi liphakeme kunenani lomsebenzi ofisa ukuwenza.
Ngilahlekelwe yikhadi lami le-NEO. Kumele ngenzeni?
Uma ulahlekelwe yikhadi lakho, kufanele wazise iqembu lethu lamakhadi ngokushesha ngengxoxo noma ku- [i-imeyili ivikelwe], bese ubacela ukuthi bavimbe ikhadi lakho. Ithimba lizokuqondisa kulezi zinyathelo ezilandelayo.
Ikhadi lami selizophelelwa yisikhathi. Kumele ngenzeni?
Inyanga eyodwa ngaphambi kosuku lokuphelelwa yisikhathi kwekhadi lakho uzothola isaziso mayelana nokushintshwa kwekhadi.
Esimemezelweni esifanayo uzocelwa ukuthi ubonise ikheli lakho lokulethwa.
Qaphela: Sicela wazi ukuthi uma usuthole ikhadi lakho elisha, kufanele ulisebenzise ku-NEO Web Client Office noma nge-mobile app.
Ngingawavimba yini amakhadi we-NEO axhumene ne-akhawunti yemali?
Yebo. Ukuze wenze kanjalo, sicela uthumele uphenyo kuthimba lethu lokuxhaswa kwamakhasimende ngengxoxo noma ku- [i-imeyili ivikelwe].
Ngabe inkampani ingakhipha amakhadi abasebenzi bayo ngaphansi kwe-akhawunti yebhizinisi?
Yebo. Ngemininingwane sicela uxhumane nathi